के तपाइलाई ग्यास्ट्रिक छ ? झुक्किएर पनि खाँदै नखानुस् यी खानेकुरा – Jaljala Online
कन्डमबिनै गर्भ नरहने गरि यौनसम्पर्क कसरी राख्ने ?
Posted on May 12, 2019 Author Jaljala Online
रामप्रसाद धिताल, काठमाडौँ । नेपाली संस्कृतिमा विशेषगरी दुईवटा संक्रान्तिको विशेष महत्त्व छ, माघे र साउने। साउने संक्रान्तिसँगै नेपालीहरूका अधिकांश चाडपर्व आउने भएकाले पनि नेपाली संस्कृतिमा यसको विशेष महत्त्व छ । निरयण मानअनुसार सूर्य कर्कट राशिमा पुग्ने र दक्षिणायन हुने कारण ज्योतिष तथा धर्मशास्त्रमा यो दिनको विशेष महत्त्व छ । के हो संक्रान्ति ? चल सौरमानको […]
साग आयोजनाको खर्च ३ अर्ब, उद्घाटन र समापनमा १५ करोड
भोली मंसिर २७ गते तपाईको भाग्यफल कस्तो छ ? पढ्नुहोस